Wasaarada Caafimaadka Galmudug oo qeyla dhaan u dirtay dowlada Somalia | TOP NEWS
Wasaarada Caafimaadka Galmudug oo qeyla dhaan u dirtay dowlada Somalia
Wasiirka caafimaadka maamulka Galmudug Naciimo Maxamed Maxamuud ayaa ka warbixisay xaalado dhinaca caafimaadka oo ka taagan degaano ka kala tirsan gobolada Mudug iyo Galgaduud, taasi oo sababtay abaarta ka jirta deegaanada maamulkaasi.
Wasiir Naciimo oo la hadashay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in xaalado daran oo dhinaca caafimaadka ah ay ka jiraan Galmudug, islamarkaana cudurka Shuban biyoodka uu fara ba’an ku hayo bulshada ku dhaqan deegaanada maamulkaaasi oo ay sheegtay in dad badan cudurkaas ugu geeriyoodeen gobolada Mudug iyo Galgaduud.
Wasiirka caafimaadka Galmudug Naciimo Maxamed waxaa ay tilmaamtay in dadkaasi oo u badan caruur iyo dad da’ah ay u dhinteen nafaqo dari ay sababtay abaarta ka jirta deegaanadaasi.
Sidoo kale Wasiiro Naciimo ayaa baaq u dirtay dowladda federaalka oo ay ka codsatay in ay wax ka qabtaan xaaladaha caafimaad iyo tan nololeed ee ka jirta Galmudug, si ay gargaar u helaan dadka ku dhibaateysan degmooyin iyo degaano ka mid ah Mudug iyo Galgaduud.
Galmudug ayaa ka mid ah meelaha ay sida weyn u saameysay abaarta ka jirta dalka, iyadoo deegaanada qaar laga soo sheegayo xaalado dhinaca nolosha oo ay ugu wacantahay abaarta.
Wasaarada Caafimaadka Galmudug oo qeyla dhaan u dirtay dowlada Somalia added by Tifaftiraha Somalida Maanta on June 19, 2017